China COVID-19 IgM / IgG Antibody Detection Kit (Colloidal Gold) ndị na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa | Yinye
COVID-19 IgM / IgG Ihe Nchọpụta Antibody (Gold Gold)
Nhazi ọkwa: In-Vitro-Diagnosis, Ngwaahịa
Ihe nyocha COVID-19 IgM / IgG Antibody Detection Kit (Colloidal Gold) bụ mpụta agba chromatographic immunoassay maka nchọpụta qualitative nke nje (IgG na IgM) na Novel coronavirus na mmadụ dum Blood / ọbara / Plasma. Ọ na - enye aka na nchoputa nke ọrịa Novel coronavirus.
Akwụkwọ ọgụgụ coronaviruses dị na us genus. COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke na-efe efe nke ukwuu. Ndị mmadụ na-adịkarị mfe. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrịa bu ọrịa a na-ebute site na coronavirus bụ isi ihe na-ebute ọrịa; ndị na-arịa ọrịa a na-akpọ asymptomatic nwekwara ike ịbụ isi iyi na-efe efe. Dabere na nchọpụta epidemiological dị ugbu a, oge mkpuchi bụ 1 ruo ụbọchị 14, ọkachasị ụbọchị 3 ruo ụbọchị 7. Ihe ngosipụta ndị bụ isi gụnyere ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ na ụkwara akọrọ. A na-ahụ mkpọchi imi, imi na-agba, akpịrị akpịrị, myalgia na afọ ọsịsa na ọnọdụ ole na ole.
Ihe nchoputa nke COVID-19 IgM / IgG Antibody bu ihe omuma nke nwere ihe omuma maka nyocha nke oria (IgG na IgM) na Novel coronavirus na mmadu dum Blood / Serum / Plasma.
Ngwa ule a nwere: 1) ihe mkpuchi conjugate agba burgundy nwere Novel coronavirus recombinant envelopu antigens jikọtara ya na Colloid gold (Novel coronavirus conjugates), 2) nitrocellulose membrane strip nwere akara ule abụọ (IgG na IgM) na akara akara ( C akara).
Ejiri akara IgM kpuchie ya na mgbochi IgM antihuuman, IgG akara ya na Mouse mgbochi Human IgG antibody. Mgbe etinyere olu nke ule ule zuru oke n'ime ihe nlele nke ngwaọrụ nyocha, ihe nlere ahụ na-akwaga site na isi ihe gafee ngwaọrụ ahụ. IgM mgbochi Noro coronavirus, ọ bụrụ na ọ dị na mpempe akwụkwọ ahụ, ga-ekekọta na conjugates Novel coronavirus.
Mgbe ahụ, a na - ejide immunocomplex ahụ site na reagent tupu etinye na eriri IgM, na - akpụ akara IgM nwere burgundy, na - egosi Novel coronavirus IgM nke ọma nyocha. IgG anti-novel noro coronavirus ma ọ bụrụ na ọ dị na mpempe akwụkwọ ga - ekekọta na conjugates Novel coronavirus. Mgbe ahụ, a na - ejide immunocomplex ahụ site na reagent a na - ekpuchi na eriri IgG, na - eme akara IgG nwere burgundy, na - egosi Novel coronavirus IgG nke ọma. Enweghị nke akara T ọ bụla (IgG na IgM) na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma. Iji rụọ ọrụ dị ka usoro nhazi, akara agba ga-apụta mgbe niile na mpaghara akara akara na-egosi na agbakwunyela ezigbo ụdị nke ihe atụ ma na-eme ka akpụkpọ ahụ pụta.
Nke gara aga: COVID-19 Ihe Nchọpụta Anti / Antigen
Osote: Otu Nzọụkwụ Oriri Multi-Test Kit nke Ọgwụ Abuse ngwugwu Fanye
COVID-19 Antigen Nchọpụta Antigen maka Sample Sputum
Akọrọ Fluorescence Immunoassay Analyzer